२२२ स्थानीय तहमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण, प्रदेश–३ मा सबैभन्दा बढी कर्णालीमा कम
भदौ ५, काठमाडौं । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२२ मा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी विद्युतीकरण तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । उक्त तथ्यांक अनुसार ११७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण...
एनसेलको कर विवाद सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय गर्ने दिन सरेको सर्‍यै, अर्को मिति भदौ ९
साउन २१, काठमाडौं । एनसेलको कर विवाद सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय गर्ने दिन फेरि सरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासमा बिहीवार छलफल भए पनि निर्णय भने हुन नसकेपछि भदौ ९ गतेका लागि अर्को मित...
तिकंर अन्तरराष्ट्रिय ‘ट्रान्जिट’ मार्ग : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
भदौ ५, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दार्चुलाबाट तिब्बत जोड्ने तिकंर नाकालाई अन्तरराष्ट्रिय ‘ट्रान्जिट’ मार्गका रुपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुकोतर्फबाट...
साताको अन्तिम कारोबार : ०.९९ अंक घट्यो नेप्से
भदौ ५, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक घटेको छ । बिहीवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ९९ अंक घटेर १ हजार २१३ दशमलव शून्य ६ विन्दुमा बन्द भएको छ । यस दिन १ हजार २१४ दशमलव ३७ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको दोस्रो घण्टाको अवधिमा बढेर यस दिनकै उच्च विन्दु १ ह...
पूँजीगत लाभकर गणना बिधि सहज नभएकोप्रति बोर्डको ध्यानाकर्षण, बोर्डले माग्यो सिडिएससँग स्पष्टिकरण
भदौ ५, काठमाडौं । पूँजीगत लाभकर गणना प्रक्रियाको विषय सुल्झाउन भएको ढिलाईप्रति नेपाल धितोपत्र बोर्डले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएस) सँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ । बोर्डले हाल भइरहेको कागजी गणना प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन सिडिएससँग स्पष्टिकरण मागेको हो । साउन १ गते देखि भारित औषत लागतको...
भारतीय विदेशमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गरे
भदौ ५, काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतका बाह्य मामिलामन्त्री सुव्रमण्यम जयशंकरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् । बिहीवार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको शिष्टाचार भेटका अवसरमा नेपाल–भारत सम्बन्धका साथै पारस्परिकहित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । भेट...
कुलेखानी तेस्रोको १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने, केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने काम सम्पन्न
भदौ ५, भीमफेदी । कुलेखानी जलविद्युत् तेस्रो आयोजनाले आगामी दशैँअघिबाटै १४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–१ सानोटारस्थित निर्माणाधीन सो आयोजनाबाट १४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिने भएको हो । उत्पादन गरिएको सो जलविद्युत् काठमाड...
कन्टेनर पल्टिएर अवरूद्ध पासाङल्हामु राजमार्ग खुला
भदौ ५ , खोटाङ । मालवाहक कन्टेनर दुर्घटना भई सडकमै पल्टिएपछि बुधवार विहानैदेखि अवरूद्ध पासाङल्हामु राजमार्ग खुला भएको छ । स्काभेटर समेतका उपकरणको सहायताले दिनभरको प्रयासबाट पल्टिएको मालवाहक कन्टेनर उठाई बन्द राजमार्ग खुला गरिएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले जानकारी दिए । सो...
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको नाफा गत आर्थिक वर्ष (आव) मा पछिल्ला ९ वर्षयताकै न्यून रह्यो । आव ७४/७५ मा १७ अर्ब ४८ करोड कमाएको टेलिकमको नाफा आव ७५/७६ मा सात अर्बले घटी रू. १० अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । आफ्नो प्रतिस्पर्धी निजीक्षेत्रको एनसेलले सेवा विस्तार गर्नुका स...
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिबाट साउन ३० गते प्राप्त पत्रका आधारमा उक्त प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले अर्थ...